Shiinaha Abs casing 2000 + wareegyada nolosha lithium ion batari 12V 100Ah oo leh BMS Soo saaraha iyo Badeecada | LIAO
1. Kiishka balaastigga ee 12V 100Ah lithium ion baakidhka dalabka badda.
Qaabka Lambar ENGY-F12100T
Awoodda magaceed 12V
Ugu badnaan lacag joogto ah 100A
Ugu badnaan dheecaan joogto ah 100A
Miisaanka 13.5 ± 0.3kg
Cabbir 342mm * 173mm * 210mm
Codsiga Badaha, dalabka korantada, EC.
4. Badbaadinta sare: LiFePO4 (LFP) waa nooca batroolka ugu amaanka badan ee laga aqoonsanyahay warshadaha.
5. Tamarta cagaaran: Ma laha wax jiidaya deegaanka.
Macluumaadka Warshadaha Iyo Warka
Sanadihii la soo dhaafay, mowduuca ilaalinta deegaanka ayaa soo jiitay dareenka sii kordhaya. Noocyada tamarta tamarta maraakiibta ayaa si tartiib tartiib ah uga wareegaya tamarta foosha una wareegeysa tamarta kaarboonka yar. Isbeddelka korontada si tartiib tartiib ah ayuu u sii kordhayaa, wuxuuna bilaabay in si xoog leh loo dallaco loona adeegsado maraakiibta.
Maraakiibta korontada waxay leeyihiin faa'iidooyinka ilaalinta cagaaran ee deegaanka, eber wasakheynta, nabadgelyada iyo qiimaha yar ee isticmaalka, iyo qarashaadka ku baxaya ay aad uga hooseeyaan naaftada iyo maraakiibta shidaalka ee LNG. Intaa waxaa dheer, maraakiibta korontada ku shaqeeya waa kuwo fudud qaab dhismeedka, xasilloonida hawlgalka, iyo kharashyada dayactirka oo hooseeya, taas oo ka dhigaysa inay ku habboon yihiin isbeddellada deegaanka mustaqbalka.
Maraakiibta korontada waxay u baahan yihiin inay qaadaan tiro badan oo baytariyaal ah, waxayna leeyihiin shuruudo sare oo ah heerka dheecaanka bateriga, wareegga wareegga, iyo qiimaha.
Marka la eego xulashada nooca batteriga, marka la barbar dhigo baytariyada aashitada leedhka, baytariyada lithium iron phosphate waxay leeyihiin faa'iidooyin muuqda marka la eego amniga, cufnaanta tamarta, iyo waxqabadka wareegga. Si kastaba ha noqotee, baytariyada birta ah ee loo yaqaan 'lithium iron fosfate' ayaa hadda si aad ah loogu adeegsadaa basaska tamarta cusub iyo meelaha lagu keydiyo tamarta. Batariyada lithium iron phosphate ee loo adeegsado maraakiibta korontada waxay la kulmi doonaan xaqiijin farsamo oo dheeri ah, waxay u baahan yihiin qeexitaanno adag iyo qiimaha wax soo saarka oo sareeya.
Baytariyada quwadda Lithium iron phosphate oo leh waxqabad guud oo wanaagsan marka loo eego xagga amniga, wareegga iyo heerka ayaa ah kuwa guud. Iyo sida saamiga baytariyada birta ah ee loo yaqaan 'lithium iron fosfate' loo isticmaalo berriga maraakiibta korontada ku kororta mustaqbalka, qiimaha badeecadaha ayaa muujinaya isbeddel hoos u socda.
Mustaqbalka, isbeddelka batteriga markab lithium wuxuu inta badan diiradda saarayaa doomaha doonta, doomaha dalxiisyada, maraakiibta xamuulka ee gudaha, suuqyada waaweyn ee magaalooyinka xeebta ku teedsan, iwm. , kaas oo dardar galin doona adeegsiga baytariyada lithium-ka ee maraakiibta.
Hore: Nooca Bolt-ka nooca loo yaqaan 'Bolt' prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 unugga baytariga ee korontada iyo keydinta tamarta
Xiga: Shiinaha soo saaraha 19 inch rack sii kordhaya 48V 50Ah lithium ion batari (LiFePO4) isgaarsiinta